Igwe nke Magnet Na-edozi, Ngwado-azụ Ngwá Ọrụ Mat, Magnetic Sheets Manufacturer na Supplier
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Igwe Igwe,Ngwunye Ngwado-azụ azụ,Ihe mpempe akwụkwọ,Ngwado Mgbakwunye Onwe Onye,Magnet Mat,
Home > Ngwaahịa > Magnet Mat
Ngwaahịa nke Magnet Mat , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Igwe Igwe , Ngwunye Ngwado-azụ azụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ihe mpempe akwụkwọ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Adresive Magnet Roll - Igwe ndọta na Nkwado nkwado
Adresive Magnet Roll - Igwe ndọta na Nkwado nkwado Ejiri magnet Mat mere mpempe akwụkwọ siri ike na-agbadochi azụ. Site na ịbelata, enwere ike ịme ya na ụdị ndọta ọ bụla nke dabere na arịrịọ ndị ahịa chọrọ. A na-ejikarị ebe ndọta ahụ maka ịwụnye mpempe akwụkwọ ndọta anyị na mgbidi nkịtị. Wụnye matriki azụ azụ ga-adọtị...
Azụmaahịa Ntanetịzụ Onwe Gị Ejiri magnet Mat mere mpempe akwụkwọ siri ike na-agbadochi azụ. Site na ịbelata, enwere ike ịme ya na ụdị ndọta ọ bụla nke dabere na arịrịọ ndị ahịa chọrọ. A na-ejikarị ebe ndọta ahụ maka ịwụnye mpempe akwụkwọ ndọta anyị na mgbidi nkịtị. Wụnye matriki azụ azụ ga-adọtị anyị na ala dị larịị,...
China Magnet Mat Ngwa
A na-eji Magnet Mat mee nke akwa ntụ ntụ magneti dị elu na akwa nhazi akwa. Site na ịcha, enwere ike ịme ya n'ụdị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ndị ahịa. A na-ejikarị usoro ntọala mee ihe maka ịwụnye katọn anyị na-echekwa na mgbidi nkịtị. Wụnye ngwongwo magnet base-back-back-back on smooth surface, Na-ehichapụ akwụkwọ nkwado ahụ site n'otu akụkụ wee dakwasị n'elu ala.
Maka ihe dị mfe iji wụnye, na-egbukarị magnet na mpempe akwụkwọ.
Ikekwe n'oge ụfọdụ, anyị ga-enwe ihe mgbochi na mgbidi ahụ, atụmatụ ndị dị mfe na-ebipụ nwere ike ịkwụsị nchekasị maka ihe mgbochi n'oge nrụnye.
Ngwunye Ngwado-azụ azụ
Ngwado Mgbakwunye Onwe Onye
Igwe Igwe Ngwunye Ngwado-azụ azụ Ihe mpempe akwụkwọ Ngwado Mgbakwunye Onwe Onye Magnet Mat Igwe ogwe Nnukwu Igwe Igwe